Nhau - Chii chinonzi Gallium Nitride?
Gallium Nitride ndeye bhanari III / V yakananga bandgap semiconductor iyo inokodzera-yakakwira-simba simba transistors anokwanisa kushanda pane yakanyanya tembiricha. Kubva kuma1990, yanga ichishandiswa kazhinji muchiedza chekuburitsa diode (LED). Gallium nitride inopa mwenje webhuruu unoshandiswa pakuverenga-kuverenga muBlu-ray. Pamusoro pezvo, gallium nitride inoshandiswa mune semiconductor magetsi zvishandiso, zvikamu zveRF, lasers, uye photonics. Mune ramangwana, tichaona GaN mune sensor tekinoroji.
Muna 2006, kusimudzira-maitiro GaN transistors, dzimwe nguva anonzi GaN FETs, akatanga kugadzirwa nekukura kwakatetepa kweGaN pane AIN layer yeyakajairwa silicon wafer vachishandisa simbi organic kemikari vapor deposition (MOCVD). Iyo AIN dhata inoshanda seyakaganhurana pakati peiyo substrate neGaN.
Iyi nzira nyowani yakagonesa gallium nitride transistors kuti ibudiswe mumafekitori akafanana aripo sesilicon, vachishandisa angangoita akafanana maitiro ekugadzira. Nekushandisa nzira inozivikanwa, izvi zvinobvumidza zvakafanana, zvakaderera mitengo yekugadzira uye zvinoderedza chipingaidzo chekutora kune madiki ma transistors ane kuita kwakanyanya kuvandudzwa.
Kuti uenderere kutsanangura, ese semiconductor zvinhu zvine izvo zvinonzi bandgap. Iyi inguva yesimba mune yakasimba uko pasina maerekitironi anogona kuvapo. Zvichitaurwa zviri nyore, bhendi rakanangana nekugona kwazvinoita zvinhu zvakasimba kuti zviitise magetsi. Gallium nitride ine 3.4 eV bandgap, ichienzaniswa nesilicon's 1.12 eV bandgap. Gallium nitride yakafara bhendi gap inoreva kuti inogona kutsigira yakakwira voltages uye yakakwira tembiricha kupfuura silicon MOSFETs. Iri rakapamhama bandgap inogonesa gallium nitride kuiswa kune optoelectronic yakakwira-simba uye epamusoro-frequency madhizaini.
Iko kugona kushanda pane yakanyanya kupisa tembiricha uye ma voltages kupfuura gallium arsenide (GaAs) transistors zvakare inogadzira gallium nitride yakanakira magetsi ekuwedzera ma microwave uye terahertz (ThZ) zvishandiso, senge imaging uye sensing, ramangwana musika ataurwa pamusoro. GaN tekinoroji iri pano uye inovimbisa kuita zvese zviri nani.